Ardayda Qalinjabinaysa “Ha isku xidhin cidna waxaad ……” Qalinkii:Nim’an Hussein Barkhad | Wajaale.com
Ardayda Qalinjabinaysa “Ha isku xidhin cidna waxaad ……” Qalinkii:Nim’an Hussein Barkhad
Sanad walba waxa ka soo baxa jaamacahadaheena boqolaal arday oo u diyaar ah in ay shaqo ka helaan dawlada iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay.
Waa wax lagu farxo in ardaydaasi wax weyn ka badalidoonto horumarka iyo horusocodka dadka iyo dalkaba oo baahi weyn u qaba xiligan in waxbadan laga qabto baahiya aasaasiga ah ee bulshadeena.
Haddaba iyada oo ay jiraan boqolaalkaas arday ee sanad kastaba u soobaxa dalka ma leeyihiin tayadii iyo tabartii ay ugu jeedin lahaayen jihada saxda ah amaba horumarka leh?. Ma u qalmaan qaar shaqo qaban kara? Amaba ma yihiin jiilkii wakhtigan qarankooda kor u qaadi lahaa ee hormoodka u noqon lahaa?. Ma yihiin qaar hankoodu sareeyo suurtana galinkara badhaadhe iyo barwaaqo lagu tanaado?.
Waxaan filiyaa in arday kasta oo ka baxaaya jaamacada amaba ka baxay uu ka jawaabo su’aalaas iyo qaar kaloo badan. Aan u soo gundo dago ujeedada aan ka leeyahay mawduucan.
Iyagoo tixgalin aad u badan inaga muddan jaamacadaheenu xiligan waxaan odhan karnaa xidhiidhka ka dhexeeya takhakhusaatka ay bixiyaan iyo shaqada suuqyadeena taalaa farqi weyn baa u dhexeeya, taasina waxaaa kuu cadayn karta awooda uu ardaygu leeyahay marka uu jaamacada ka soo baxo.
Waxaa xaqiiq ah manta in ardaydeena ka soo baxaysa jaamacadu intooda badani aanay awoodin in ay qoraan hal warqad codsi ah oo u qoran si farshaxanimo ku dheehan tahay lehna eedaabta iyo asluubta codsiyada loo qoro amaba laysla yaqaan .
Kamaha hagrasho jaamacadeehena inay ku barto waxa aad bari marka aad ka baxdo jaamacada ku anfaca oo jamacadana magac iyo milgo u noqon kara adiguna aad hormood ku noqon lahayd ee waa ka itaal iyo hagrosho la’aan.
Haddaba iyadoo ay sidaasi tahay oo aanad warqad qori Karin maxaa uu noqonayaa xalka aad u baahan tahay in adiga naftaadaa iyo cid kastoo ku lug lahayd inaad ka baxdo jaamacad ay uga faaiidi karaan dadaalkaagii iyo koodiiba.
Waxaan mar kastoo aan jaamacad xasuustaba iyana xasuustaa hadalkii macalin ka mid ah macalimiintaydii jaamacada “Manta waxaad wada fadhidaan kuraas isku mid ah, waxaad wada baranaysaan hal maado, ma ogtihiin in aan bari marka aad jaamacad ka baxdaan midkina kan kale agfadhi doonin, manta inta aad jaamacada ku jirto diyaarso waxa aad saaxiibkaa kaga duwanaanayso marka aad u baxdaan suuqa amaba aad noqotaan tartamayaal shaqo.”
Maadaama ayna jaamacadaheenu buuxin Karin baahiyaadka ardayga manta ka baxaaya jaamacada, maxaa lagaaga baahay ardayoow adiga. Waxaan odhan karaa qodobadan iyo qaar kale oo aanan halkan ku xusin;
1. Ku dadaal waxbarshada muddada aad ku jirto jaamacada.
2. Baro xirfad aad kaga duwan tahay ardayda aad isku fasalka tihiin.
3. Ogolow inaad ku shaqayso tabaruc (Internship).
4. Ahow u adeego bulsho.
5. Kor u qaad awoodaada luuqadeed.
6. Xidhidh la samayso dadka shaqo bixiyayaasha ah.
Ha isku xidhin cidna waxaad dhamaantiin tihiin tartamayaal nolosha ah, noloshu way ka balaadhan tahay waxbarasho, waxbarshada ka dhigo in ay fure kaaga noqoto albaabada nolosha ee faraha badan.
Qodobadan iyo qaar kale oo badan Waxay kuu horseedi karan inaad noqoto mid bulshay ah oo ku xidhan bulshada, laguguna jeclaado dadaalka aad galinayso hawlaha aad qabanayso , ogsonow mar kasta oo aad danaha umada ka fikirto waxay sugnaashiyo aad u helaysaa danahaaga gaarka ah.
Dhamaan talaabooyinkan waxay ku horseedi doonta in aad adigu suuqa ka noqoto ka loo baahan yahay in uu shaqeeyo waayo waxaad taqaanaa xirfad cidkastaaba u baahan tahay waxaanad tahay qof kalsooni bulshada ku dheh leh.
Waxaan ku soo gabogabaynayaa inaad ogaato in manta aad furas haysato siina calaamadin karto halka aad u socoto in aad mustaqbalka gaadho iyo qofka aad noqonayso bari marka aad ardaynimada ka baxdo, sii falanqee sida aad u eekaanayso , la tasho dadka nolosha kaaga horeeyey kana agdhawaw dadka noloshaada wax tari kara.
Iskaga dheereer saaxiibka maqaaxiyaha iyo meelaha bulshadu isku timaado ka caanka ah, ee canaanta wadanka iyo dadkiisa ka sheekeeya.
Noqo qof xaqiiqda la nool , talaabso taagtaa, horusocodnimana ogow.
Nim’an Hussein Barkhad